नयाँ परीक्षण भाइरल संक्रमण को सम्पूर्ण इतिहास प्रकट गर्न रगत को एक ड्रप - समाचार नियम
नयाँ परीक्षण भाइरल संक्रमण को सम्पूर्ण इतिहास प्रकट गर्न रगत को एक ड्रप
शीर्षक यो लेख “नयाँ परीक्षण भाइरल संक्रमण को सम्पूर्ण इतिहास प्रकट गर्न रगत को एक ड्रप” इयान नमूना विज्ञान सम्पादक द्वारा लेखिएको थियो, गार्जियन बिहिबार 4th जुन लागि 2015 18.00 UTC
अनुसन्धानकर्ताहरू रगतको एक ड्रप देखि भाइरल संक्रमण एक व्यक्तिको पूर्ण इतिहास प्रकट कि एक सस्ते र तीव्र परीक्षण विकास गरेको छ,.
परीक्षण डाक्टर संक्रमित छन् कि भाइरस को एक सूची बाहिर पढ्न अनुमति दिन्छ, या संक्रामित गर्न जारी, तिनीहरूले कुनै स्पष्ट लक्षण कारण छैन विरामीहरु गर्दा.
प्रौद्योगिकी जीपीएस मान्छे infecting सक्षम र भाइरस को सबै को लागि रोगियों स्क्रीन सक्ने मतलब. यो यस्तो hepatitis सी र एचआईभी रूपमा गम्भीर संक्रमण को खोज कायापलट गर्न सक्छ, मान्छे बुझेर बिना वर्ष पूरा गर्न सक्छन् जो.
"साधारणतया, एक डाक्टर जान्न चाहनुहुन्छ गर्दा कसैलाई भाइरस संक्रमित भएको भने, तिनीहरूले भाइरस छ के अनुमान गर्न छ, र त्यसपछि भाइरस लागि विशेष हेर्न,"स्टीफन Elledge भने, जो बोस्टन ब्रिघम र महिला अस्पतालमा परियोजना नेतृत्व.
मानिसहरू डाक्टर गर्न वर्षेनी जाने र आफ्नो भाइरल इतिहास लिपिबद्ध प्राप्त जहाँ "यो एक निदान गर्न सक्छ. यो पक्कै पनि गम्भीर भाइरल संक्रमण पत्ता लगाउन सक्छ र एक रोगी तिनीहरूले थियो थाहा थिएन कि,"उहाँले भन्नुभयो.
यो (£ 16) परीक्षण भन्दा अधिक विश्लेषण गर्न कृत्रिम जीव र तीव्र जीन अनुक्रमण मा अग्रिम मा आउँदैन 1000 एक पास मानव भाइरस उपभेदहरू. अहिले सम्म, सबैभन्दा परीक्षण एक पटकमा एक भाइरस लागि देख्यो. Elledge नवीनतम परीक्षण भनेर अनुमान, VirScan भनिन्छ, प्रक्रिया सक्छ 100 दुई तीन दिन मा नमूने.
सम्बन्धित: कसले इबोला लागि 15 मिनट परीक्षण approves
परीक्षण शरीर संक्रमित हुन्छ जब प्रतिरक्षा प्रणाली भाइरस लड्न एंटीबडी बनाउँछ भन्ने तथ्यलाई शोषण. यी एंटीबडी वर्ष र पनि दशकसम्म Bloodstream मा बाँच्न सक्छ.
परीक्षण विकास गर्न, Elledge आफ्नो सतहहरूमा मा मानव भाइरस देखि प्रोटीन को बिट पूरा गर्न हानिरहित भाइरस को समूहहरु ईन्जिनियर. कुल मा, तिनीहरूले भन्दा अधिक देखि प्रोटीन लगे 1000 यस उपभेदहरू 206 मान्छे संक्रामित जानिन्छ भाइरस को प्रकार. एंटीबडी भाइरस invading चिन्न र आफ्नो आक्रमण सुरु गर्न यी प्रोटिन fragments प्रयोग.
एक रोगी देखि रगत को एक सानो बिंदु परिमार्जित भाइरस संग मिश्रित जब, तिनीहरूले मानव भाइरस प्रोटीन गर्न मा छेस्कनी छ कुनै पनि एंटीबडी तिनीहरूले invaders रूपमा चिन्न. यो वैज्ञानिक त्यसपछि एंटीबडी बाहिर पुल र तिनीहरूले अटक गरेका प्रोटिन fragments देखि मानव भाइरस पहिचान.
"यो भाइरस infecting मानिसहरूलाई के मा हामी एक पूर्ण unbiased तरिकामा हेर्न सकेको छु पहिलो पटक हो, र हामी सबै ज्ञात भाइरस लागि यो गर्न सक्छन्,"Elledge भने. परीक्षण एक व्यक्ति vaccinations देखि को उत्पादन एंटीबडी माथि उठयो, तर यी परीक्षण परिणाम देखि वेवास्ता गर्न सकिन्छ. विवरण पत्रिका मा रिपोर्ट छन् विज्ञान.
यो प्रविधिको एक प्रदर्शन मा, टीम देखि रगत विश्लेषण 569 अमेरिकामा मान्छे, दक्षिण अफ्रिका, थाईल्याण्ड र पेरु. परीक्षण भेट्टाए, औसत मा, मानिसहरू संक्रमित भएको थियो 10 भाइरस को प्रजाति, परीक्षण कम्तिमा दुई मान्छे को histories थियो हुनत 84 भाइरस को विभिन्न प्रकार देखि संक्रमण.
सबै भन्दा साधारण संक्रमण herpes भाइरस थिए, चिसो sores कारण जो, stomaches विरक्तलाग्दो कि enteroviruses, इन्फ्लूएंजा, र rhinoviruses साधारण सर्दी गतिवान. अमेरिकामा ती अन्य देशहरुमा ती भन्दा कम संक्रमण अनुभव थियो, र अपेक्षित रूपमा, वृद्ध मान्छे youngsters भन्दा धनी भाइरल histories थियो.
परीक्षण अंग transplant रोगियहरुको लागि प्रमुख लाभ ल्याउन सक्छ. Transplant सर्जरी पालन गर्न सक्ने एउटा समस्या अनपेक्षित छ भाइरस को reawakening वर्ष को लागि रोगी वा दाता मा निष्क्रिय lurked छन् कि. रोगी गरेको प्रतिरक्षा प्रणाली अंग तिरस्कार तिनीहरूलाई रोक्न गर्न लागूपदार्थ संग suppressed छ जब यी भाइरस जबर्जस्ती फर्कन सक्नुहुन्छ. मानक परीक्षण अक्सर सर्जरी अघि latent भाइरस लेने असफल, तर VirScan प्रक्रिया र खतरा गर्न आफ्नो उपस्थिति र चेतावनी डाक्टर र बिरामीको प्रकट सक्छ.
"यो धेरै मूल्यवान हुन सक्छ,"भन्यो Iwijn डी Vlaminck, न्यूयोर्क मा कर्नेल विश्वविद्यालय मा एक बायोमेडिकल इन्जिनियर, अध्ययन संलग्न थिएन जो. "यो अनुमति के तपाईं अतीत मा हेर्न र अघिल्लो संक्रमण गर्न एक व्यक्तिको जोखिम मापन छ गर्न. महत्त्वपूर्ण फाइदा छ, तपाईं लेटेंसी जानुहोस् कि यी संक्रमण पत्ता लगाउन सक्छन् किनकी. तपाईं यो धेरै व्यापक तरिकामा रोगियों र अंग दाताहरुलाई देखि रगत स्क्रीन र भाइरल reactivation संभावित भविष्य मुद्दाहरू भविष्यवाणी सक्छ। "
वैज्ञानिकहरूले परीक्षण पनि जीवनमा गर्न देखिने unrelated रोगहरु पछि मान्छे predispose कसरी निश्चित भाइरल संक्रमण मा प्रकाश डाली विश्वास गर्नेछन्. केही संक्रमण शरीर ऊतकों गर्न स्थायी क्षति हुन सक्छ, वा प्रतिरक्षा प्रणाली बदल, तिनीहरूले वृद्ध हुँदा चिकित्सा समस्याहरू जोखिम बढी मानिसहरू छोड्नेछन् तरिकामा. उदाहरणका लागि, एपस्टीन-बर्र भाइरस संक्रमण क्यान्सर को जोखिम हुर्काउन सक्छन्. तर कसरी अन्य भाइरस लामो अवधि स्वास्थ्य सम्म murkier छ असर. "विश्लेषण को त्यो प्रकारको यस साँच्चै सम्भव बनाउँछ कुरा हो,"Elledge भने.
17457	0 एड्स र एचआईभी, लेख, जैव रसायन र आणविक जीवविज्ञान, जीवविज्ञान, hepatitis सी, इयान नमूना, प्रतिरक्षा, मुख्य खण्ड, चिकित्सा अनुसन्धान, विज्ञान, गार्जियन, बेलायत समाचार
← आफ्नो आँखा आफ्नो विचार धोका कसरी पश्चिम मा शीर्ष चार आधुनिक खूनी →